Abu Dhabi - Tel Aviv Flights na Etihad Airways
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Abu Dhabi - Tel Aviv Flights na Etihad Airways
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Israel Na -agbasa Akụkọ • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa UAE • Akụkọ dị iche iche
Etihad na-eme akụkọ ihe mere eme na ụgbọ elu njem mbụ si GCC gaa Israel
Etihad Airways, ụgbọ elu mba nke UAE, ga-abụ onye mbụ GCC na-ebu ụgbọelu iji rụọ ọrụ ụgbọ njem njem na nke si Israel, iji weta ndị isi njem na ndị njem nke Israel na UAE.
Flightgbọ elu akụkọ ihe mere eme, nke mmekorita ya na Maman Group, ga-apụ Tel Aviv na 19 October, nke ụgbọ elu Etihad Boeing 787 Dreamliner na-arụ ọrụ maka njem awa atọ na ọkara site na Israel gaa UAE. Njem nloghachi ga-apụ Abu Dhabi na 21 Ọktọba.
Dịka njem azụmahịa njem, ụgbọ elu ahụ ga-eweta otu ndị isi nke ụlọ ọrụ ndị njem, ndị na-eme mkpebi isi ụlọ ọrụ, ndị ọrụ njem, na ndị na-ebu ibu, yana ndị mgbasa ozi iji nweta Abu Dhabi na UAE dum, na ọkpụkpọ oku nke Etihad Airways na ndị nnọchi anya Dhalọ ọrụ njem nlegharị anya nke Abu Dhabi.
Nke a bụ mmepe kachasị ọhụrụ na mmekorita na-eto eto n'etiti mba abụọ na-esote nguzo nke mmekọrịta mba ọzọ, yana mbinye aka nke nkwekọrịta Abraham n'etiti UAE na Israel na Washington DC na 15 Septemba. Ọ na - esokwa ụgbọelu ụgbọelu Israel nke mbụ bụ El ụgbọ elu azụmahịa mbụ atụ dị n'etiti Tel Aviv na Abu Dhabi na 31 August.
Onye ukwu Mohamed Mubarak Fadhel Al Mazrouei, Onye isi oche, Etihad Aviation Group, kwuru, sị: “flightgbọ elu nke oge a bụ ohere akụkọ ihe mere eme maka mmepe nke mmekọrịta siri ike n’ebe a na UAE, na Israel, na Etihad dị ka ụgbọ elu mba, nwere obi ụtọ na-eduga ụzọ ahụ. Anyị na-amalite ịchọpụta oge dị ogologo nke mmekọrịta ọhụrụ a, nke ga-ejide n'aka na ọ ga-erite uru nke akụ na ụba nke mba abụọ ahụ, ọkachasị na mpaghara azụmaahịa na njem, yana ndị na-akpọ mpaghara a dịgasị iche iche ma dịkwa ebube. n'ụlọ. ”
Dịka onye nhazi dị mkpa maka azụmaahịa, ụgbọ elu dị n'etiti Tel Aviv na Abu Dhabi ga-ebukwa ibu ahịa sitere na, ma bụrụ maka ya, isi ihe gafere netwọọdụ zuru ụwa ọnụ Etihad, na mgbakwunye na ndị ọbịa azụmaahịa.
N'ikwekọ na ụgbọ elu azụmahịa mbụ na ememme nkwekọrịta udo na-adịbeghị anya n'etiti UAE na Israel, Etihad abụrụla onye ụgbọelu mbụ na-abụghị nke Israel na Middle East ịmalite webụsaịtị ewepụtara maka ahịa Israel na Hibru. Ọzọkwa dị na Bekee, nsụgharị Israel nke ụlọ ọrụ gọọmentị ụgbọ elu nwere ọdịnaya dijitalụ gụnyere ozi zuru oke na arụmọrụ Etihad, ngwaahịa, ọrụ na netwọkụ. Saịtị ahụ gụnye ntuziaka njem Abu Dhabi.
Dị ka ụgbọelu nke mba UAE, Etihad Airways bụ otu n'ime ụgbọ elu na-eduzi ụwa, toro maka ọrụ na-enweghị atụ, ụlọ ọrụ na-eduga n'ụlọ ọrụ, na ezigbo nnabata ndị Arab.